Maxaa soo cel-celiya fatahaadda Wabiga Shabelle? | KEYDMEDIA ONLINE
Maxaa soo cel-celiya fatahaadda Wabiga Shabelle?
Sanad walba ayuu Wabiga Shabelle waxa uu ku fatahaa deegaannada uu dalka ka maro intooda badan, walow sanadahan dambe uu ka batay tirada uu markii hore fatahaaddu uu sameyn jiray.
Labadii sano ee ugu dambeysay waxaa si aad ah usoo noq-noqday fatahaadda uu sameeyo Wabiga Shabelle, kaasi oo mara qaar ka mid ah gobollada dalka.
Meelaha ugu daran ee Wabiga uu ka fatahay ayaa ah gobollada Hiiraan iyo Shabellaha dhexe (Hirshabelle)
Keydmedia Online ayaa dabagal dheer ku sameysay sababta keentay soo noq-noqoshada fatahaadda Wabiga Shabelle, iyadoo la hadashay dadka deegaanka.
Nabadon Khaliif Cumar oo ka mid ah waxgaradka ku sugan gobolka Hiiraan, gaar ahaan magaalada Baladweyne ayaa inoo sheegay in ay jiraan shaqsiyaad la shaqeysta hay’ado, kuwaasi oo bur-buriya difaacyada loo sameeyey Wabiga, si aanu magaalada ugu soo fatahin.
Sidoo kale, nabadoonka ayaa sheegay in Labadii sano ee ugu dambeysay dhibta ugu weyn ay ahayd in si kas ah Wabiga loo furayey (la jabinayey dhinacyadisa) taasina ay so dedejisay in xilliyadii fatahaadda looga bartay Wabiga in uu ay kaso hormaro.
“Waxaa jira rag lacag kasoo qaadanaya hay’ado ka faa’ideysta xilliga fatahaadda, waxay jabiyaan kar-kaarada (Dhinacyada) Wabiga, waana sababtii keentay in sanad gudahiis uu Wabiga kusoo fataho B/weyne Saddex jeer” ayuu yiri Nabadoon Khaliif Cumar.
Dhanka kale, shacabka ku dhaqan Baladweyne ayaa badi qaba aragtida ah, in si kas ah loo dumiyo dhinacyada Wabiga si biyaha ay uso galaan xaafadaha magaaladaasi.
Maamulka gobolka Hiiraan iyo kan Baladweyne ayaa ka gaabsaday iney faah faahin ka bixiyaan waxa ka jira dadkan la sheegay iney sabab u noqdaan fatahaadda Wabiga Shabelle ee Baladweyne.
Si tan la mid ah, Wabiga ayaa ku fataha deegaanno badan oo ka mid ah gobolka Shabellaha Dhexe, balse waxgaradka gobolkan ayaa qaba in maamulkooda uu ka gaabiyay wax ka qabashada fatahaadda soo noq-noqotay.
“Waxaan aad ula yaabnay in maamulkeena uusan dan ka lahayn in laga hortago fatahaadda Wabiga, kaliya markii ay wax dhacaan ayuu noola soo ordaa Baco iyo jawaanno carro lagu shubo, kuwaas oo aan waxbo inoo tareyn” sidaasi waxaa inoo sheegay qof ka gaabsaday magaciisa oo ku sugan degmada Mahadaay ee Shabellaha Dhexe.
Wabiga Shabelle ayaan la caro bixin tan iyo markii ay dhacday dowladdii dhexe ee u hoggaaminayey Maxamed Siyaad Barre, waana sababaha sii fududeeya in Wabiga uu fataho, marka laga soo tago tuhunka ay qabaan shacabka ku dhaqan Hirshabelle.